Mayelana neMikhiqizo Yokugqumisa - Shandong Topower Pte Ltd
I-Ceramic Fiber Blanket & Board
Q1: Ingabe uthumela noma yimiphi imikhiqizo yakho eYurophu?Iyini imikhiqizo?
A1: Yebo, imikhiqizo yethu ithunyelwa eYurophu.Njenge-RHI, iCalderys ne-Intocast wonke angamakhasimende ethu.Sithekelisa i-firebrick, isitini se-magnesia chrome kanye nezinto ezifakwa kuzo.
Q2: Ungangitshela inani elilayishwayo lengubo yakho ye-ceramic fiber ukuze uthole isitsha esigcwele?
A2: Yebo, sicela ubhekisele kubuningi be-FCL ngezansi.
I-Rolls / Pallet
Q3: Ungakwazi yini ukuhlinzeka ngenani elilayishwayo le-Ceramic Fiber Board yakho ukuze uthole isitsha esigcwele?
A3: Yebo, sicela ubhekisele kubuningi be-FCL ngezansi.
Q1: Zingaki izinhlobo zezintambo onazo?
I-A1: Ngokwesimo esijwayelekile sinezinhlobo ezimbili: intambo eyindilinga nentambo yesikwele.
Okwezinto ezijwayelekile sinezinhlobo ezimbili: intambo enensimbi engagqwali eqiniswayo nentambo ene-fiberglass reinforcement.
Q2: Wawunjani umehluko wentambo enensimbi engagqwali eqiniswayo nentambo ene-fiberglass reinforcement?
A2:1.Stainless steel wire reinforcement,izinga lokushisa lokusebenza lingaba ngu-1050℃-1100℃,ngoba izinga lokushisa eliphakeme kakhulu lensimbi engagqwali licishe libe ngu-1050℃.
2.I-Fiberglass reinforcement,izinga lokushisa lokusebenza lingafika ku-550℃-650℃,ngoba izinga lokushisa eliphakeme kakhulu le-Fiberglass libalelwa ku-600℃.
Q3: Bekunjani ukupakishwa ngentambo?
I-A3: Imvamisa ukupakishwa kuyifilimu yokuvikela yepulasitiki+isikhwama esilukiweyo.Uma siceliwe singakwazi ukwenza ngokwezifiso ikhathoni lamakhadi aqinile kumakhasimende anelogo edingekayo, izinkokhiso zihlukanise zibalwe ngokwesimo sangempela.
Q1: Iyini usayizi ojwayelekile wephepha le-ceramic fiber?
I-A1: Usayizi ojwayelekile we-ceramic fiber paper ukujiya ngu-0.5-10MM, futhi usayizi ojwayelekile wobubanzi ngu-610MM/1220MM.Awukho umkhawulo ebudeni.Kodwa uma ipakishwe ebhokisini, kutuswa ukuthi ingeqi ku-7.32KG (ukuminyana kwephepha lefibre ngu-200kg/m3).
Q2: Kuyini ukupakishwa kwephepha le-fiber?
A2: Ukufakwa kwephepha le-Ceramic fiber: ukupakishwa kwephepha le-ceramic fibre ngokuvamile ukupakishwa kwebhokisi, Usayizi webhokisi elijwayelekile lephepha le-ceramic fiber: 320 * 320 * 620MM
Izingcezu zamabhokisi ephepha e-ceramic fibre zenziwa ngokwezifiso ngokuya ngosayizi oshiwo yikhasimende.
I-Q3: Ingabe iphepha le-ceramic fiber linomphumela wokungenwa kwamanzi?
I-A3: Ingaphezulu lephepha le-ceramic fiber linomphumela ongangeni manzi, kodwa akufanele lifakwe emanzini isikhathi eside.Umphumela wokungena kwamanzi wephepha le-fiber encibilikayo ungcono kunephepha le-fiber.
Kunconywa ukuhlola ngokuya ngendawo yokusetshenziswa yangempela (amasampula wamahhala anganikezwa)